Gorfaynta Buugga “Axmed-Siilaanyo: Nin Tacab badan galiyay Qarannimada” | Caroog News
Buuggu waxa uu xusayaa in Axmed-Siilaanyo kaalin muuqata ku lahaa waxqabadyadii Kacaanka. Waxqabadyadiisii waxa ka mid ahaa halabuurkii barnaamijkii ‘iskaa wax u qabso’ oo dalka oo dhan ka hanaqaaday, hirgalinta mashruucii ‘qaramaynta ilaha dhaqaalaha’ iyo curinta qorshayaashii dalku ku horumaray sannadihii ugu horreeyay ee Kacaanka. Axmed waxa uu sidoo kale lahaa hindisaha Soomaaliya ugu biirtay ‘Jaamacadda Carabta’ kaas oo ku yimid qoraalkiisii la baxay ‘why we should call ourselves Arabs?’
Waxa sidoo kale lagu nasanayaa bixinta derajooyinkii ciidamada qaranka iyo dedaalladii madaxweyne Siilaanyo ee nabadaynta gobollada bari, kuwaas oo isugu soo biyashubtay heshiiskii Caynaba ee Soomaalilaand iyo maamulka Khaatumo ee Cali Khaliif Galaydh, Oktoobar 2017kii. Waxa kale oo laga warramayaa waxqabadkii madaxweynaha ee gobolka Sool, iyada oo Xildhibaan Siciid Maxamed Cilmi oo mudanayaasha wakiillada ee gobolkaas ka tirsani ku soo gunaanadayo hadal nuxurkiisu yahay: 21kii sanno ee Maxamed Siyaad, gobolka Sool hal riig-biyood looma qodin, laakiin toddobadii sanno ee Siilaanyo waxa laga qoday lix riig. Waxa kale oo la soo qaadayaa waxyaabihii laga qabtay siyaasadda arrimaha dibadda oo laga xusayo wadahadalladii Soomaaliya ee lagu dhiirraday iyo xidhiidhka waddammada Carabta oo maalgashigooda ay astaan u yihiin: madaarrada Kuweyt dhistay iyo maalgashiga dekadda Berbera ee Imaaraadka. Tan danbe ee dekadda buuggu aad ayuu u dhex galayaa.
Buuggu waxa uu u badan yahay sheekooyin googoos ah oo si qubane ah u daadsan, kuwaas oo qaarkood bilaa xigasho yihiin. Waxa sidoo kale ku xusan tixo dhawr ah oo aan meelna lagu xusayn ciddii curisay. Sidoo kale, faallooyinka qoraha iyo hadallada dadka uu ka warsaday xogaha buuggu ma kala soocna, waxaanad marar badan garan waayaysaa cidda hadlaysa. Tusaale ahaan, lama garanayo cidda ka warramaysa sheekada ku saabsan Siilaanyo iyo Boobe (bogga 161).
Buugga waxa marar badan lagu soo qaadayaa magacyo beeleed, iyada oo loo soo gaabinayo xarfo: HY, HA, HT, iwm. Waxa aad mooddaa in qalinka buugga lagu qoray marar badan reeraysan yahay, marar kalana xisbiyaysan yahay, marar kalana caaddifado kale leeyahay. Haddii ay sidaas u jirto, taasi waa arrin lid ku ah ballaadhnaanta qofeed ee Siilaanyo.
Ugu danbayntii, ka sokow arrimaha farsamo ee aan kor ku naqdiyay, buuggani waxa uu xanbaarsan yahay taariikh muhiim ah oo loo baahnaa. Cabdiraxmaan Cartan waxa aan ku bogaadinayaa dedaalka uu buuggan innagu soo gaadhsiiyay, aniga oo dadka wax akhriyana ku boorrinayaa in ay akhristaan.